IMomentum iyazigqaja ngempumelelo yamaProteas e-India - Impempe
IMomentum iyazigqaja ngempumelelo yamaProteas e-India
UCarel Bosman oyinhloko yabaxhasi kwiMomentum
Iqembu lekhilikithi labesifazane laseNingizimu Afrika lizobuya e-India lishayela phezulu ngemuva kokushaya into ecokeme liwina izindebe ezimbili kulolu hambo.
AmaProteas aphethe uhambo ngokushaywa yi-India ngamawikhethi ayisishiyagalolunye emdlalweni wokugcina weT20 e-Ekana International Stadium, eLucknow, e-India, ngoLwesibili. Nokho lokhu akusho lutho ngoba awine uchungechunge lwemidlalo yeT20 ngo 2-1, akhala emuka nendebe. Kungokokuqala ngqa iqembu lakuleli labesifazane liwina uchungechunge lwemidlalo yeT20 libhekene ne-India.
UCarel Bosman, oyinhloko yabaxhasi iMomentum, okuyiyona engabaxhasi bekhilikithi eNingizmu Afrika, uthe bajabule kakhulu ngohambo lweqembu lakuleli labesifazane olube yimpumelelo.
“Kithina njengeMomentum kusihlaba umxhwele kakhulu ukubona impumelelo yeMomentum Protea Women e-India. Yinto enkulu ukuwina imidlalo ewuchungechunge yosuku olulodwa nokuqopha umlando ngokuwina eyeT20. Kithina sekube wuhambo oluhle kakhulu siyiMomentum njengabaxhasi bokuqala ngqa ukuzihlanganisa neqembu labesifazane kusukela eminyakeni eyisishiyagalombili edlule,” kusho uBosman ekhuluma nentatheli ye impempe.com ngoLwesithathu ekuseni.
“Ngaleso sikhathi kwakuyiqembu lama-amesha, akekho umdlali owayenenkontileka esemthethweni neCSA. Ngenxa yokubaxhasa kwethu sibabonile bekhula ngayo yonke indlela. Nakhu sesilapha namuhla, sibheke imiqhudelwano emibili yeNdebe yoMhlaba ezayo. Ukubabona beya e-India bafike bashaye into ecokeme njengoba benzile, yinto enkulu kakhulu. Kuyinto emnandi kithina njengoMomentum ukuba yingxenye yaleli qembu. Siyabahalalisela kakhulu ngempumelelo yabo futhi sikubheke ngabomvu ukubahlangabeza uma sebefika mhlaka 25 (ngoLwesine) ngehora lesithathu,” uchaze kanje uBosman ezwakala ejabule.
NgoLwesibili emdlalweni wokugcina amaProteas awadlalanga kahle okokuqala ngqa kulolu hambo. Abhethe kuqala enza ama-run angu-112 kuphela ngemuva kwama-over angu-20. ULizelle Lee, oyisethenjwa samaProteas wenze ama-run angu-12 kuphela. Umdlali owenze kangcono uSune’ Luus, ukaputeni, ophume esenze ama-run angu-28. Ulekelelwe uLara Goodall oshaye ama-run angu-25.
Iphendula i-India yenze kwabukeka kalula kakhulu njengoba ilahlekelwe yiwikhethi eyodwa kuphela yase iwuwina umdlalo. Ukuwina kwe-India kwenze yavala ihlazo njengoba ikwaze ukuwina umdlalo owodwa kuphela kwemihlanu yosuku olulodwa, nowodwa kwemithathu yeT20.
Impumelelo yamaProteas e-India ize nemiphumela emihle njengoba uMarizanne Kapp enyukele endaweni yesibili emhlabeni kubadlali abashwibayo abakleliswe yi-ICC.
Previous Previous post: Akasezi uZungu kwiBafana, uyifisele inhlanhla
Next Next post: Basale bedangele kumiswa indebe yomhlaba